Ama-dollar angcono noma ama-cryptocurrensets? | Izindaba zamagajethi
Ama-Cryptocurrencies Sekuyisikhathi eside beshiya isifiso sokufuna ukwazi ukuze babe, ngokwabo, ingxenye ebalulekile yomnotho womhlaba ezicini ezahlukahlukene. Hhayi nje kuphela lapho bezulazulelwe khona emkhakheni wokonga noma wokuqagela, kepha bayimpahla ebalulekile okufanele bayinakekele ngesici esibaluleke njenge ukuhweba kwamanye amazwePhambilini bekungukugcina okukhethekile kwemali yase-US.
1 Izinzuzo zama-cryptocurrensets njengendlela yokukhokha ekuhwebeni kwangaphandle
2 Ama-cryptocurrensets adla phansi kusuka kudola
3 Ukuhweba nge-Cryptocurrency
Izinzuzo zama-cryptocurrensets njengendlela yokukhokha ekuhwebeni kwangaphandle
Enye yezinzuzo esizozibona kakhulu emaphaketheni ethu ukuthi ukudluliswa kwama-cryptocurrensets unamakhomishini aphansi kakhulu, noma awunawo amakhomishini esimweni sama-cryptos athile. Lokhu kungenxa yokuthi senza ukuthengiselana esikwenza ngaphandle kwamabhange, ngoba asidingi umxhumanisi. Isamba semali esingacabangi, ngoba ikhomishini izinkampani ezivame ukukhokhisa lapho zenza ukudluliswa komhlaba ziphezulu kakhulu.
Kunabachwepheshe ababikezela ukuthi ngokuzayo sizokwazi ukukhokha ngqo nge-e-Wallet yethu (isikhwama se-elekthronikhi lapho abasebenzisi bama-cryptocurrensets bawagcina khona) esikhundleni sokusebenzisa amakhadi wesikweletu akudala. Ukubona ukuthi ama-cryptocurrensets athola kanjani izikhundla ngokushesha, asinakusho ukuthi yimicabango eqanjiwe, kepha umbono wekusasa eliseduze ngezinketho zokuba yiqiniso.
Ama-cryptocurrensets adla phansi kusuka kudola
Yize inamahloni ngandlela thile, kuyacaca ukuthi imali etshalwe kuma-cryptocurrensets endaweni ethile imiswa ukutshala imali, futhi yize imakethe ye-forex isemakethe enkulu kunazo zonke emhlabeni, yini okuhweba ngama-cryptocurrensets vele unyakaze cishe ama- $ 400.000 billion futhi iyaqhubeka nokukhula ngokwandayo (akumele sikhohlwe ukuthi eminyakeni eyi-10 eyedlule ama-cryptocurrensets abengekho ngaphandle komqondo wesazi esithile senzululwazi).
Futhi ngemuva kokuwa okungapheli kuka-2018, kufanele siqhakambise unyaka omuhle wezi-2019 onama-cryptocurrensets esewonke, siqhakambisa i-bitcoin, okuthi, noma ivulwe ngo-2019 ngaphansi kwama-dollar ayi-4.000, yafika, ngenkathi sithinta i-equator yalonyaka, ama- $ 13.000. Kodwa-ke, ngaphezu kwalokho okushiwo ngabaphikisi bayo, iningi labo elingazange libone ku-bitcoin ngaphezu kwebhola lezomnotho elingenalutho abantu abahlupheka ngalo. Zonke ezinye izinkampani ezinkulu, yize zingaphezulu kwenani ebenazo ngoJanuwari, azenzi kahle kangako engxenyeni yesibili yonyaka kuze kube manje.
Okokuqala, sizothi akufanele siphambanise ukuhweba ngezivumelwano zokwehluka (CFD ngesifinyezo sayo ngesiNgisi) ngama-cryptocurrensets, ngokuhweba ngama-CFD nge-forex noma ngemakethe ye-forex uqobo, okuwukushintshaniswa kwemali okufanele kwenziwe, ngokwesibonelo, yinkampani enkulu esebenza emazweni amaningi, nezwe layo elihambelanayo zezimali.
E-forex, abantu benza noma balahlekelwe yimali ekusebenzeni kwe-forex, ngoba intengo yabo iyashintsha njalo, ngakho-ke okuhle ukuthenga imali phansi bese uyayithengisa, noma ukuyishintsha, uma inamandla, njengoba besingenza nganoma iyiphi enye impahla yezezimali .
Kepha ukuhweba ngamaCFD ngama-cryptocurrensets, currencies (i-forex) noma izinsiza zemvelo, kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kunezinzuzo nokubi, esizophawula ngakho.
Okokuqala nje, sisebenza ngokusizakala, okusho ukuthi uma ngokwesibonelo sithenga ama-CFD wefa ngamadola ayi-1.000 10 futhi iphesenti lesiqinisekiso samathrekhi lingu-100%, ukuvula isikhundla kuzodingeka ukuthi sibeke amadola ayi-20 kuphela, kepha uma intengo yempahla isiphikisana nathi Ama-200% sizolahlekelwa ama-dollar angama-XNUMX, kabili imali efakiwe, futhi ngokufanayo, ngakho-ke, sifisa ukuthola, noma sizibeke engcupheni yokulahlekelwa, imali ethe xaxa kunaleyo ebingaba khona ekutshaleni kwethu kuphela.
Lokhu kungenxa yokuthi lapho uvula isikhundla umthengisi usimboza "ngemalimboleko". Ngokusobala uma sizibeka engcupheni yemali singalahlekelwa yiyo, futhi ukulahlekelwa yimali “abayibolekile” kusho sizobe sesizitholile izikweletu, ngaphezu kokulahlekelwa yimali etshaliwe.
Ngalesi sizathu, kubaluleke kakhulu ngaphambi kokuqala lolu hlobo lomsebenzi ukuqinisekisa ukuthi idiphozi esiyenzayo singakwazi ukulahlekelwa yilo (izinketho zokuqoqa ukulahleka ziphakeme kakhulu) nokuthi sinolwazi olunzulu lokutshala imali ezimakethe eziphakeme zokuguquguquka.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Criptomonedas » Ama-dollar angcono noma ama-cryptocurrensets?
Buyekeza Isikhulumi Sasekhaya se-Energy Sistem 7